Tarjumadii SomaliTalk.com | Oct 12, 2005
Sida la ogyahay waxaa bishii Agoosto 2005 Hoteel ku yaal magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabka qandaraas ku kala saxiixday Cadde Muuse iyo nin Reer Australi ah oo layiraahdo Terry, heshiiskaas oo lagu sheegay in shiidaal iyo macdan lagaga baarayo Puntland. Heshiiskaas waxaa ka hor yimid DFKMG. Waxaa qoraal soo saaray Jaaliyada Soomaalida Puntland ay ku dalbaneysey in Puntland ay arinta si degdeg ah guddi ugu saart, Puntland guddi ayey dhistay kala xaajooda DFKMG. Laakiin waxaa muuqata in aan arrintaas labada dhinac (DGPL iyo DFKMG) wax heshiis ah ka gaarin.
Haddaba waxaan akhristayaasha halkan ugu soo tebineynaa khudbadihii ay habeenkii qandaraaska la saxiixayey ay jeediyeen Madaxweynaha DGPL, Maxamuud Muuse Xirsi (Gen. Cadde Muuse) iyo Wasiirka Maaliyada DGPL Maxamed Cali Yuusuf (Dr. Gaagaab). Khudabadahaas oo aan dhowaan helay iyagoo ku qoran Af Ingriis maadaama markii hore dadka loogu talo ahaayeen shisheeye. Balse khudbadihii oo aan Afka hooyo ee Soomaaliga ku tarjumney waa kuwan.
Khudbadii Dr. Gaagaab
Caweysin wanaagsan dhammaantiin martida sharafta leh. Caawa oo ah 30-ka Agoosto 2005 waxaan saxiixnay qandaraas taariikhi ah oo aan ku saxiixnay Hilton Dubai, kaas oo u dhexeeya Dawlada Puntland iyo Consort. Qandaraaskan, sida uu Dr. Black xusay, waxa uu qaatay wadahadal socdey muddo 7 bilood ah oo labada dhinac u dhexeeyey, caawa waa gabagabadii shaqadaas adag. Qandaraaskani waxa uu ku saabsan yahay baaritaanka iyo ka faa'iideysiga macdanta Puntland.
Wadankanagu waxa uu u baahan yahay horumarin badan, waxaana muddo la isla dhex marayey in aan haysano carro qani ah, sababtoo ah xadidaada aanaan cilmi baaris ku samayn karin ama xataa qodi karin, waxaan go'aan sanay in aan siino shirkad naga caawin karta hirumarintaas si ay dadkanagu uga faa'iideystaan oo aan sidaas ugu hor maro sida dalal kale ay sameeyeen waqtiyadii la soo dhaafay.
Dadka caawa suurtagal ka dhigay (in arrintani qabsoonto) waxay natuseen adkaysi badan iyo dhiiranaansho, been badan ayaa laga sheegay, Soomaaliya keliya ma ahee xataa dibadadaha. Waxaa arrimahaas ka qayb qaatay dalal shisheeye iyo shirkado waxa keliya oo ay rabaan ay tahay in ay Puntland ahaato meel iyaga u xayiran oo ay iman karaan waxna ka soo saari karaan markii ay iyagu doonaan. Consort iyo Dr. Black waxay adduunka intiisa kale tuseen in Puntland ay ganacsi diyaar u tahay. Waxay indhihooda ku arkeen waxa wargeysyada ku qoran in aysan xaqiiqo ahayn. Sawirka ay (wargeysyadu) ka bixinayaan Soomaaliya in uusan ahayn mid sax ah. Waxayna taas ku saleeyeen khibradooda Puntland. Consort waxay rabtaa in ay timaado oo ganacsi nala gasho.
Haddaan nahay dawlada Puntland ujeedanadu ma aha in aan qaadano wax aan ka ahayn waxanaga, waxa keliya ee aan rabnaa waa horumarin waxa ay leedahay Puntland.
Waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay in qandaraaskani qabsoomo, laga soo bilaabo Madaxweynaha, dadka Consort, iyo marti sharafta kale ee dawladda. Si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa Liibaan Boqor, oo lixdii bilood ee la soo dhaafay ilaawey qoyskiisa, oo dhinac u dhigay shaqiisii si uu heshiiskani uga dhigo mid ay labada dhinac ku heshiin karaan.
Marti sharafta waxaan u sheegayaa, laga bilaabo maanta waxaa Consort iyo dawlada sugaaya shaqo culus, laakiin waan ku kalsoonahay in labada dhinacba ay ka gudbayaan caqbadaha. Dawladu waxay ballan qaadeysaa wax kasta oo suurta gal ah si ay Consort ugu caawiso si ay shaqadooda u fushadaan.
Mahadsanidin, hadana waxaan magarafoonka kusoo dhoweynayaa madaxweynaha.
Khudbadii Cadde Muuse:
Caweysin wanaagsan madaxa shirkadda, wufuuda, iyo gaar ahaan Dr. Black iyo Terry. Qandaraaska aan caawa saxiixnay waqti yar ma qaadan, laakiin waa hawshii toddoba bilood. Xilligaas waxaan helay, lagayaabee, in ka badan laba iyo toban shirkadood oo danaynaya horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee Puntland, laakiin waxaan go'aansanay in aan doorano shirkada (Consort) taas oo aan caawa la saxiixanayno, sabab sahlan awgeed oo ah in heshiiskoodu uu bara-dheereeyey horumarinta macdanta. Waxaan eegnay arrimo badan, waxaana aaminsanahay in ay isbedel weyn samayn doonaan.
Waxaa jira in wax badan la isla dhex maro oo ah in aan qani ku nahay khayraadka dabiiciga, waxaan rabnaa in aan ogaano waxa ku jira ciidayada. Qayb dadka kamid ah ayaa weydiinaya, maxaan arrintaas bedelkeeda heleynaa ama meeqa lacag dhan ayaan ka samayneynaa heshiiskan, laakiin anigoo ah hoggaamiyaha dawlada waxaan aad u xiisaynayaa abuurida fursadaha shaqo ee dadka, tusaale ahaan, haddii kun qof ay shaqo si toos ah ama si dadban uga helaan waxaan u malaynayaa in aan wax uun gaarney. Wargeys maanta soo baxay ayaa waxa uu sheegay in aan qaadanay laaluush, ii ogolada in aan idiin xaqiijiyo in aanan xiisaynay laaluush, iyo in aanan u baahnayn, laakiin waxaan u baahanahay shirkad naga caawisa in aan lugahayaga isku taagno.
Consort waxay na tuseen in ay rabaan in ay na caawiyaan, Dr. Black waxa uu na tusay in uu awoodo caawinaad. Terry, oo ah mudanaha ag fadhiya Dr. Black waxa uu Puntland u yimid in uu carruurtanada caawino, laakiin markii uu arkay beenta laga faafiyey dalkayaga, sida beenta ah deggananasho la'aanta, ammaan darrida, dilka baahsan (looga faafiyey), iyo socodkiisii uu dalka ku safray waxa uu xaqiiqsaday masiibada ay beentaasi abuureysey, waxa uu noo ballan qaaday in uu noo caawin doona si kasta oo uu awoodo. Waxa uu na baray Consort.
Maxaan rajeyneynaa? Waxaan rajayneynaa caawinaad badan, gaar ahaan dib u dhiska adeegyada asaasiga ah. Consort waxay noo sheegtay in aysan keliya eegayn macdanta, laakiin waxa kale oo ay dalka ka caawineysaa xoogaa horumarin ah.
Waxaan idin weydiisanayaa dhammaantiin in aad u hawl fudusdeysaan shirkaaan shaqadeeda, aadna xaqiijisaan in aan siino dhammaan caawinaada ay ka heli karaan dhankeena. Waxaa dalkan ka jirey fursado badan, lakiin kama aynaan faa'iideysan. Waxaan qaxiijineynaa in aan arrintaas oo kale mar kale dhicin. Inaga (Dawlada) waxaan ballan qaadeynaa inta aan xukunka haysano inaan siin doono wax kasta oo mashruucaan ka dhigaya mid guuleysta.
Ugu horayn markii aan xukunka la wareeey waxaan hir geliyey in aan wax Visa dal ku gal ah la weydiin ajnebiga (Shisheeyaha), taasina waxay sababtay in dad badani ay yimadeen, waxay rabaan in ay caawiyaan, welina waa yimaadaan maalin kasta, waa in aan arrintaas ka faa'iideysanaa.
Gabagabadii, waxaan rabaa in aan u sheego dawladda Federaalka in aan nahay qayb muhiim ah oo kamid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo in Puntland ay lacag badan ku bixisay si loo hirgeliyo Soomaaliya oo federaal ah, laakiin waxaan ka xumahay in ay Raadiyaha kula wareegayaan hadal (faallo) ah in aanaan heshiis la saxiixan karin shirkadaha shisheeye.
Haddaba, ii ogolaaa in aan idiin sheego anagu waxaan haysanaa sharci xuquuq noo siinaya in aan qandaraas (heshiis geli karo). Waxaan leenahay sharci anaga gaar noo ah kaas oo noo ogolaanaya in aan sidaas samayno, anaga oo keliya ayaa ah dadka ka mas'uulka ah wax kasta oo khuseeya Puntland.
Allah ayaa mahad leh in ugu dambayntii aan qandaraaskan saxiixnay.
Haddii ay jiraan wax su'aalo ah mar dambe aayaan aqbalayaa.
Khudbadii Cadde Muuse oo Ingriisi ah [pdf]
Khudbadii Gaagaab oo Af Ingriisi ah [pdf]
Khudbadahaas waxaa Madaxweynaha DGPL, Maxamuud Muuse Xirsi (Gen. Cadde Muuse) iyo Wasiirka Maaliyada DGPL Maxamed Cali Yuusuf (Dr. Gaagaab) ay ka jeediyeen Hoteelka Hilton oo saxiixa qandaraskaasi lagu qabtay.
Waxaa dhowaan soo baxay, sida ay shaaca ka qaaday shirkad kale oo cusb oo lagu magacaabo "Range" in "Shirkada Consort" ay tahay in ay qayb ku yeesheen madaxda Puntland. Akhri halkan...
Faafin: SomaliTalk.com | Oct 12, 2005